Dhulku sida farshaxanka: sawirada dayax gacmeedka barnaamijka Landsat | Abuurista khadka tooska ah
Melissa Perrotta | | Sawir, Sawirro, Dhiirrigelinta
Waaxda Xogta Joolojiga Mareykanka waxay abuurtay dhowr aruursi oo loo yaqaan "Earth As Art" si loo ururiyo sawirada dayax gacmeedka meeraha Dunida. Sidan ayuu ku soo uruuriyay sawiro farshaxan badan ay qaateen kooxda dayax gacmeedyada ka kooban barnaamijka Landsat.
Barnaamijka Landsat wuxuu ka kooban yahay hawlgallo taxane ah halkaasoo dayax gacmeedyo ay dhisteen oo uu dhigay Mareykanka ay ku wareejiyeen fiirsashada qaraarka sare ee dhulka dushiisa. Dayax gacmeedkii ugu horreeyay ee Landsat ah waxaa lasoo saaray bishii Luulyo 23, 1972. Kii ugu dambeeyay ee taxanahan waa Landsat 8, oo hawada sare loo rogay Febraayo 11, 2013.
Sawirada la helay waxay matalayaan meeraha meeraha iyo dhacdooyinka cilmiga dhulka iyo saadaasha hawada oo leh shahaado farshaxan sare. Tani waa sida aan u fiirsan karno sawirada "midab been ah". Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay dayax gacmeedyadu waxay uruuriyaan sawirro muujinaya labada mowjadood ee muuqda iyo kuwa aan muuqan ee ku jira qaybta elektromagnetic. Isha bani’aadamku ma laha awood ay wax ku aragto midabada infrared Laakiin ku darista iftiinkan sawirrada caadiga ah, waxay u oggolaaneysaa saynisyahannada inay ku eegaan dhulka midabbo aan dabiici ahayn.
1 Daruuraha Aleutian
2 Delta Ganges
3 Malaspina Glacier
4 Phytoplankton ee Gotland
5 Delta Wabiga Delta
6 Dhul argagixiso
7 Qaababka dabeecadda
8 Tessera mosaic
10 Hooska daruurta qarsoon
Qaababka daruuraha ee jasiiradaha Aluetian ee galbeedka. Kala duwanaanta midabka ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay kala duwanaanta heerkulka iyo cabirka dhibcaha ka kooban daruuraha.
Webiga Ganges wuxuu sameeyaa Delta aad u ballaadhan oo gaara Bay of Bengal.
Carrabka glacier-ka ugu weyn Alaska oo dhererkiisu gaarayo 3880 Km oo laba jibbaaran. Sawirka waxaan ku aragnaa si wanaagsan oo loo qeexay socodka ay biyuhu raaceen markii uu barafoobay.
Phytoplankton ee Gotland
Sawirkani wuxuu muujinayaa "Van Gogh Starry Night" qaabka jameecooyinka waaweyn ee phytoplankton cagaaran looga helo xeebta Gotland, oo ah jasiirad Iswidhish ah oo ku taal xeebta Badda Baltic
Delta Wabiga Delta
Dusha sare ee dusha sare oo matalaya midab cagaaran oo dhalaalaya oo u dhexeeya magenta oo ka jawaabaya meelaha ugu badan, oo ka soo horjeedda biyaha badan ee Wabiga Paraná
Biyo la'aan, bilaa dhir, iyo biqil la'aan, webiga Tanezrouft ee Aljeeriya waa mid ka mid ah gobollada ugu cidlada badan Saxaraha.
Xaaladaha qalafsan ee mangroves-ka waxaa lagu muujiyey midab cagaaran oo madow oo ku yaal dhinacyada Webiga Ord ee Australia.
Webiga Tietê wuxuu tilmaamayaa mosaicdan tessera oo laga sameeyay qaabab midabyo badan leh oo ku yaal Ibitinga, Brazil.
Marka taarikada tectonic ay isku dhacaan, lakabyada dhagaxa ayaa kala dillaaci kara. Juquraafiyadu waxay ugu yeeraan ifafaalaha "cilado". Sawirkan waxaad ka arki kartaa heerarka qoto dheer ee kaladuwan ee dadka badan.
Hooska daruurta qarsoon
Sawirkani wuxuu ka kooban yahay qaabab ay soo saareen daruuro si mucjiso leh loogu qaabeeyey Masar. Daruuraha waxay u muuqdaan casaan dhulkuna buluug ka yahay saamaynta infrared.
Si aad u aragto dhammaan muuqaalka sawirada ay soo wada ururiyeen dhammaan hawlgallada Landsat guji aquí. Waxaad ku soo dejisan kartaa sawirrada JPG ama TIF.
Waxaad sidoo kale iibsan kartaa noocyada daabacan aquí.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » Dhulku sida farshaxanka: sawirada dayax gacmeedka barnaamijka Landsat
Sawirrada qosolka leh ee Abaalmarinta Sawirka Duurjoogta Majaajillada ah